सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त 'गोरे' सार्वजनिक, के हो सुन काण्ड ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ सार्वजनिक, के हो सुन काण्ड ?
सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ सार्वजनिक, के हो सुन काण्ड ?
By पिएनपिखबर on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १०:०५ समाचार
काठमाडौँ, ८ जेठ : साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त ठानिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
अनुसन्धानका लागि गठित टोलीलाई ४५ दिनको म्याद दिइए पनि टोलीले अनुसन्धान पूरा गरी नसकेकाले सरकारले टोलीको म्याद जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ । संयोजक पौडेलले सुन काण्डका मुख्य अभियुक्त गोरे समातिएकाले गोरेसँगको बयानबाट थप अनुुसन्धान गरिने बताउनुभयो ।